FIDIRANA TANY MANAN-TOMPO : Mampihorohoro ny fikambanana Fagnanko ao Toamasina
Lasa asa fampihorohoroana amin’izao fotoana izao ny ataon’ny fikambanana Fagnanko tarihin-dRaoby Rajaonarison Alphonse. 11 août 2017
Tsy mijanona amin’ny fidirana an-keriny amin’ny tany manam-tompo ihany no ataon’ity fikambanana Fagnanko ity ankehitriny, fa manao herisetra amin’ny mpiambina an’ireo tany tiany halaina. Tsy maty voalavo an-kibo izy ireo amin’ny fikasana haka an-keriny ilay tany manodidina ny 160 ha ao Belambo Toamasina Faharoa. Tany izay efa manan-tompo ary misy titra ara-dalàna saingy mbola mikiry hatrany ny Fagnanko.
Ny alahady 6 aogositra lasa teo, nalain’i Alphonse sy ireo mpiara-dia aminy an-keriny tao amin’ny trano fonenany ao Belambo Toamasina Faharoa i Théodore 30 taona izay mpiambina ny tanin-dRanoromalala ao Belambo. Tokony tamin’ny 11 ora sy 45 minitra antoandro no nisehoan’izany. Niasa nanao raharaha teo an-tokotany ilay mpiambina no nigadona teny an-toerana ireo mpitarika ny fikambanana Fagnanko. Niditra tao an-tranon’ilay mpiambina izy ireo. Nentin’izy ireo ny kojakoka toy ny fanamafisam-peo sy radio. Lasan-dry Alphonse ihany koa ny vola 1 000 000 Ariary notehirizina tao an-trano.
Taorian’izay, dia nofatorana tamin’ny tenda nentina nampanaovina dia an-tongotra sy hazakazaka ilay mpiambina. Narahina daroka izany rehetra izany. “Nentina tao Ambalamanasy sy Mangarano aho, asaina mihazakazaka, mandady amin’ny tany, nodarohana, nambanana antsy”, hoy ny fanazavan’i Théodore. Tsy vitan’izany fa mbola notrobarina tamin’ny hazo ny fitombenany. “Tanjon-dry Alphonse Fagnanko ny ahatonga ahy ho leo monina ka hiala mora ao amin’ny toerana ambenako ao Belambo mba ahafahan’izy ireo miditra an-keriny amin’ny tokotanin’ny mpampiasa ahy”, hoy hatrany ny fanazavan’i Théodore. Naharitra ora dimy ny fampijaliana nataon’ny fikambanana Fagnanko an’i Théodore. Miaramila sendra nandalo tao Mangarano nahita ny fampijaliana no voalaza fa nanavotra azy.
Naiditra Hopitaly izy taorian’izay. Na dia efa nivoaka ny hopitaly kosa izy amin’izao fotoana izao dia mbola tsy tafaverina amin’ny laoniny ny toe-pahasalamany. Nilaza ny hametraka fitoriana ny tenany manoloana izao fihetsika feno habibiana nataon’ny ekipan-dry Alphonse taminy izao.
Misy solombavambahoaka miray tendro
Mampiaka-peo manoloana izao fampihorohoroana sy vono natao tamin’ny mpiambina izao i Randrianarivelo Honorien izay mpitondra tenin’ny fianakaviana Philbert tompon’ny tany amina ha maro ao Belambo. Miantso ny fitondram-panjakana ny tenany mba handray fepetra manoloana izao habibiana sy asa fampihorohoroana izao raha mbola tany tan-dalàna marina i Madagasikara. Ahiana hitatra amin’ny faritra maro ao Toamasina mantsy ny fampihorohoroana sy fidirana an-keriny amin’ny tany manan-tompo ataon’i Alphonse sy ny forongony io raha tsy misy fepetra hentitra raisin’ny fanjakana.
Nambaran-dRandrianarivelo Honorien hatrany fa misy solombavambahoaka iray ao Toamasina Faharoa miray tendro amin’izao fampihorohoroana sy fidirana an-keriny amin’ny tany manan-tompo izao. Mahagaga, hoy izy, fa io solombavambahoaka natao ho mpanao lalàna io indray no mitarika ny olona mandika lalàna sy mampihorohoro.
Milaza ho misy mpitsara miaro azy ao Toamasina
Nanitrikitrika Randrianarivelo Honorien fa milaza azy ho tsy tratry ny aloka ao amin’ny fitsarana mihitsy i Alphonse filohan’ny Fagnanko raha mbola ny fitsarana ao Toamasina no mitsara azy. Ambentintenin’i Alphonse amin’ireo vahoaka fitahiny ny filazana fa « manana havana mpitsara ambony ao amin’ny fitsarana ao Toamasina ny tenany ka tsy higadra velively ».
Nidoboka enim-bolana an-tranomaizina ny filoha lefitry ny fikambanana
Niakatra fitsarana Toamasina ny talata 8 aogositra lasa teo ny filoha lefitry ny fikambanana Fagnanko, Razafimahatratra Fanja Henri. Fandrahonana ho faty, fanimbana fananan’olona, fidirana an-keriny amin’ny tany manan-tompo, fisolokiana, fitarihana fikambanana tsy ara-dalàna. Ireo rehetra ireo no vesatra nanenjehana azy. Ranoromalala sy ny fianakaviana Philbert no mpitory. Nivoaka ny andron’ny 8 aogositra io ihany ny didy. Sazy mihatra enim-bolana an-tranomaizina sy fandoavana lamandy 3 000 000 Ariary no sazy azon-dRazafimahatratra Fanja Henri, filoha lefitry ny fikambanana Fagnanko. Nisaotra amin’izao fihetsika feno fahendrena nasehon’ny fitsarana Toamasina izao Ranaromalala sy ny fianakaviana Philbert.
Nandritra io fotoam-pitsarana io no nahalalana fa tsy fikambanana mijoro ara-panjakana akory ny Fagnanko. Fikambanana izay kalaza ratsy ao Toamasina amin’ny fidirana an-keriny amin’ny tany manan-tompo. Maro amin’ireo olona tia tanindrazana ao Toamasina ankehitriny no mitsangana mijoro manohitra ny fikambanana Fagnanko.